Toamasina : Tototry ny loto sy ny fako -
AccueilRaharaham-pirenenaToamasina : Tototry ny loto sy ny fako
Toamasina : Tototry ny loto sy ny fako
03/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy misy izay tsy mimenomenona amin’ny fahavoretrana sy loto, ary fako ao amin’ny renivohitr’i Betsimisaraka, na ny mponina ao an-toerana izany, na vahiny mandalo.
Tena tsy hita intsony izay maha renivohitr’i Madagasikara ara-toekarena an’i Toamasina. Ny fako misavovona isaka ny faritra izay aleha, ny rano miandrona etsy sy eroa, ny loto amin’ny sisin’arabe izay aleha…
Hatreto, tsy hita izay fandraisan’andraikitry ny ben’ny tanànan’i Toamasina, Elysé Ratsiraka, mahakasika ny fandaminana ny tanàna tsy hitoeran’ny loto sy fahavoretrana. Ho an’ireo mpivarotra sy mponina izay sendra anay, tsy mankasitraka ny fitantanan’ity ben’ny tanàna avy amin’ny antoko Mapar ity mihitsy izy ireo. “Tsy mety aminay mihitsy io ben’ny tanàna io. Tsy mandray andraikitra momba ny tanàna mihitsy. Tsy hita soritra ny asany amin’ny maha ben’ny tanàna azy. Tsy hainay intsony na tsy fandraisana andraikitra ilay izy, na tsy fahafehezana ilay adidy sy andraikitra hiantsorohany. Aiza ve ka izay aleha rehetra dia mamofona fako avokoa eto Toamasina…”, hoy ireo mponina sendra anay.
Tsy vitan’izay ihany fa nohazavain’ireo mponina sy mpivarotra, fa mampanantena hatrany ny eo anivon’ny kaomin’i Toamasina amin’ny fanalana sy fanesorana ireo fako mivangongo amin’ireo faritra maro. “Mbola tsy hita hatramin’izao izany fanesorana ireo fako ireo izany eh! Manamaimbo tanàna, ary mety hampirongatra valanaretina samihafa izao raha mitohitohy”, hoy hatrany izy ireo sorena.
Rehefa nanontaniana kosa ny teo anivon’ny Kaomina, nanambara ny tompon’andraikitra iray fa efa noresahina sy nodinihin’izy ireo niaraka tamin’ny Ben’ny tanàna ny mahakasika ny olan’ny tanàna, saingy mbola tsy nisy fepetra mazava noraisina. Araka izany, ny ben’ny tanàna, Elysé Ratsiraka mihitsy, no miraviravy tanana, ka mampiaina ny mponin’i Toamasina anatin’ny loto.
Japon – Madagasikara : Rivo-baovao eo amin’ny firenena roa tonta
Fifanarahana vaovao no vokatry ny dian’ny Filoham-pirenena tatsy Japon. Tahaka ny firenena rehetra dia anisan’ny nanakatom-baravarana ny firenena japoney nandritra ny krizy, izay nisy teto amin’ny firenena ny taona 2009, hatramin’ ny taona 2014. Niverina ...Tohiny
Angovo azo avy amin’ ny herin’ny masoandro : Efa azo ampiasaina ny 20 MW etsy Ambohimpihaonana